केही राष्ट्रिय रोग : एक अनुसन्धान - Fitkauli
नपत्याए नि:शुल्क अस्पतालहरूमा हेर्न जानोस् कक्षामा मानौँ एउटा भव्य प्रोसेसन ने चलेको हुन्छ । तै हाम्रा कतिपय डाक्टरसाहेबहरु स्टेथोस्कोप सुघाउनासाथ रोगको गन्ध पाइहाल्नुहुन्छ र मात्रै हो, नत्र गयाका पण्डाले श्राद्ध गराएझैँ आएजति बिरामीलाई लस्करै राखी आफ्नोआफ्नो रोग सम्झेर मम भन्नोस् भनी सामूहिक जाँच गर्नुपर्ला भनेजस्तो भइसकेको छ । यसै त टेलिफोनको कल आयो कि दमकलझैँ कुद्नुपर्ने डाक्टरी पेसा, त्यसमाथि टोलटोलमा क्लिनिकको साइनबोर्ड झुन्डयाएर प्रतीक्षारत औषधिपसल । यो असल कि उ असल ? सबभन्दा राम्रो आफ्नै बिरामी- पसल । अब तपाईं नै भन्नोस्, यस्तो बेफुर्सदीको अवस्थामा डाक्टरसाहेबहरुबाट नयाँनयाँ रोगको रिसर्च कसरी होला ?
त्यसैले त आजदेखि यो महत्त्वपूर्ण कार्यभार मैले लिँदै छु । मैले नै नलिई नहुने कारण अर्को के पर्‍यो भन्नुहुन्छ भने मेडिकल साइन्स हाम्रो विध्या नै होइन । समुन्द्रपारिको साइन्स पढेर टुकुचावारिपारिका रोगहरुको रिसर्च कसरी गर्ने ? मेडिकल साइन्स मात्र पढेको डाक्टरसाहेब कसैलाई एक दिन बिहान विष्णुमतीको भ्रमण गराइदुनोस्, त्यहाँको पोजिसनबद्ध प्रोसेसन देख्ता उहाँ पक्कै सोच्नुहुनेछ काठमाडौँमा कलेरा बढेछ । वास्तवमा त्यो कलेरा होइन, काठमाडौँ सहरको टिपिकल रोग हो भन्ने कुरा उहाँलाई कसले बताइदेओस् । त्यस्तै दिन बैँसैमा कुप्रिएका कतिपए तन्नेरीलाई देख्ता डाक्टरसाहेब आत्तिँदा हुन्… धनुष्टङ्कारले धेरैमाई खतम पार्न लागेछ; वास्तवमा उहाँलाई कसले बताइदेओस्; यो धनुष्टङ्कार होइन, पौने पेटको चमत्कार हो । अधिकांश नेपालीहरु साँझबिहान पौने पेट पाने- रोटी, दिउँसो होटेलमा हाफ प्लेट आलुदम खान्छन् भन्ने रहस्य मेडिकल साइन्सका पुस्तकमा कहाँ लेखेको छ र ? हामी भिँडेखोर्सानीमा भिटामिन ‘ए’ पाउँछौँ, भ्यान्टामा भिटामिन ‘भि’ देखि ‘जेड’ सम्म; टिनका भाँडाकुँडामा परेजति पदार्थ स्वत: प्रोटिन भैहाल्छन्; कालो भाँडामा पाकेजति सबै क्याल्सियम । त्यसैले त म भन्दै छु अब धन्वन्तरिको आयुर्वेद, हिप्पोक्रेटिसको एलोप्याथी र ह्यानिम्यानको होमियोप्याथी कुनैबाट पनि हाम्रो देशका खासखास रोगको पत्ता लाग्न सक्तैन ! तर धन्दा नमान्नुहोस्, शास्त्रै नयाँ आविष्कार गरेको छु- आधुनिक नेपालोप्याथी ।
यो नयाँ अनुसन्धान र आविष्कारमा लागेबापत मैले पनि कमसे-कम हाललाई कायममुकायम डाक्टरको दर्जा त पाउनै पर्ने हो, तर हाम्रो समाजको आधुनिक परम्परा अलि बेग्लै छ, मैले रोगहरुको अनुसन्धान गर्न लागेको सुइँको पाउनासाथ कतिपय डाक्टरहरु हाम्रो अधिकारमा हस्तक्षेप गर्यो् भनी उजुर गर्न पाल्नुहुनैछ; कोही इष्टमित्रचाहिँ यो छुसीले चाहिँदो- नचाहिँदो आयक्टिभिटी देखाएर हामीभन्दा पुग्ने दाउ ल्यायो भनी खुट्टो तान्न थाल्नुहुनेछ । कोही बान्धव फलानाको मगज त सुइँकेछ नि भन्दै सम्भावित मेन्टल हस्पितलको पेसेन्टलिस्टमा मेरो नाम दर्ता गराउन पुग्नुहुनेछ भने कुनै हितैषि साथीले चाहिँ फलानाको दृष्टिकोण अलि वक्र छ है भन्ने जनाउ ठाउँमा पुर्या एर भद्रगोल जेलको वेटिङ लिस्टमा मेरो नाम टिपाउन सहयोग गर्नुहुनेछ । तर जोसुकैले जेसुकै भने पनि मेरो अनुसन्धानलाई भोलिको समाजले ठीक भन्नुपर्नेछ र मरणोपरान्त एउटा ठूलो पुरस्कार मेरो नाममा पन्छाइनेछ भन्ने निश्चित छ ।
दिव्य बाह्र घण्टाको अनुसन्धानपछि नेपालोप्याथीअनुसार मैले केही नयाँ रोगहरु पत्ता लगाएको छु र यिनको भाव-प्रभाव बुझ्दा म के निष्कर्षमा पुगेको छु भने आधुनिक नेपालका यी राष्ट्रिय महारोग हुन् । यी बिसेक नभएसम्म न देश स्वस्थ हुन्छ, न देशवासीकै इच्छा पुग्छ । यो के झर्कोलाग्दो भूमिका भट्टयाइरहन्छ; रोगै बताइदिए त भइहाल्यो नि भन्नुहोला; लौ टिप्तै जानोस्-
नं. १- अहिलेसम्मका डाक्टरसाहेबहरुलाई कोन्डिस मात्र थाहा छ; उहाहरु भन्नुहुन्छ- जोन्डिसमा रोगीहरुको आँखा पहेँलो हुन्छ र उसले सबै पहेँलै देख्न थाल्छ । तर नेपालोप्याथीअनुसार जोन्डिसभन्दा खतरनाक महाजोन्डिस भन्ने रोग हुन्छ । यो लागेपछि रोगीका आँखा साह्रै विचित्र भई बदलिन्छन् र उनीहरुले आफूबाहेक अरु कसैलाई मान्छे नै देख्तैनन् । धाक रबाफ र कटु जबाफ यस रोगका प्रारम्भिक लक्षण हुन्; रोग बढ्ढै गएपछि रोगीको हात लुलो तर जिभ्रो तीखो हुँदै जान्छ । ऊ कसैसित मिलेर काम गर्न सक्तैन; त्यसैले एउटा आरामकुर्सीमा राखेर दिनभर आत्मपुराण फलाकिरहू भनी छाडिदिनुपर्छ । महाजोन्डिस पोज, मोज र भोजबाट फैलने रोग हो । बेलामा उपचार हुन नसके रोगीज्यूहरु सम्झेजतिलाई सराप्तै गल्लीगल्ली भुस्याहा कुकुर घुकाएर रल्लिन थाल्नुहुन्छ । यो रोग प्राय: बुद्धिजीवीवर्गमा लाग्दछ ।
नं. २- गनेरियाजस्तै अर्को नयाँ रोग पत्ता लागेको छ- चमेरिया । तर यो जाँघबाट होइन, जिभ्राबाट पस्ने रोग हो । यसले छुनासाथ मान्छेको जिभ्रो चिरिएर आउँछ र केही दिनपछि नै दुई फ्याक हुन्छ । चमेरियाका रोगीको आँखा चनाखा हुन्छन् । हात लामो हुन्छ । यो रोग लागेको पहिले कत्ति पनि चिनिँदैन, यसैले रोगीले सबैका ढोकामा सम्मानसाथ प्रवेश पाउँछ, तर धोका नदिई निस्कन सक्तैन । चमेरिया अन्तिम स्थितिमा पुगेपछि रोगीको सर्वाङ्ग सिनोझैँ गह्नाउन थाल्छ तर गह्नाउनुभन्दा अघि नै रोगीले धेरैलाई आफ्नो रोगको कुप्रभाव पारिदिइसकेको हुन्छ । चमेरिया भन्ने रोग राजनीतिक रन्डीबाजीबाट उत्पन्न भएको हो भन्ने कुरा उहिल्यै पत्ता लागिसकेको छ ।
नं. ३- खास गरी जागिरदारहरुलाई बराबर दु:ख दिने अर्को नयाँ रोग छ- पद प्रेसर । ब्लड प्रेसरजस्तै यो पनि दुई किसिमको हुन्छ- हाईपद प्रेसर, लोपद प्रेसर । हाईपद प्रसर लागेको छ भने हरहमेसा जाँडको पुङ्गोमा डुब्ने मान्छेको खप्परबाट पनि अपुङ्गोको बास्ना आउँछ, आफ्नो नाम लेख्न जानेपछि जुनसुकै काम गर्न सकिन्छ । लो प्रेसरले सताएको छ भने कानमा झ्याउँझ्याउँ गरेर हिँड्न-सुत्न दिँदैन । जति माथि पुग्यो उति लो प्रेसरले सताउँछ । यसलाई करकर पनि भन्छन् । तर हाई वा लो जुनसुकै प्रेसर लागे पनि नियमकानुन भनी मुख बारिरहनु पर्दैन ।
नं. ४- नेपालोप्याथीअनुसार अर्को एउटा चर्को रोग पत्ता लागेको छ- कन्सुत्ले । कहाँकहाँ कसकसले केके कुरा गरे, ती सबै पहिले शान्त भएर आफ्नो कानभित्र पर्नु र जोजोसँग सम्बन्धित छ, उसउसका कानमा सुलुत्त पसालिदिनु कन्सुत्ले रोगको प्रमुख लक्षण हो । कन्सुत्ले लागेका रोगीहरु जाँचताकाका टयुसन मास्टरझैँ अथवा सोह्रसरादका पुरेतबाजेझैँ अथवा भनूँ दसैँका फौबन्जारझैँ चौबीसै घण्टामा पच्चीसतिर पुगेर कुराको लेनदेन गर्दछन् । कतै केही पाइएन भने ‘बुझ्नुभो फलानाज्यू, तपाईंलाई फलानाले फलान्थोक भन्थ्यो है’ भनी मनगढन्त कुरा सुनाएर पनि कन्सुत्लाहरु एकअर्काका बीच फाटो पारेर आफ्नो जिभ्रो कन्याउँछन् । ‘फलानाले फलानो दिन ठीक यति बजे यतिपल्ट डकार्यो्; त्यसैले त्यो दिन राति उसले कतैबाट एउटा बासी पेडा खाएको हुनुपर्छ’ भन्ने जस्ता अनुमान गरि त्यो पेडा ख्वाउने को होला र किन ख्वायो होला भनी गम्दागम्दै रातभर ननिदाउने कन्सुत्ले रोगीहरु पनि मैले धेरै पत्ता लगाएको छु ।
नं. ५- बिफरजस्तै अर्को सङ्क्रामक रोग पत्ता लागेको छ- ‘रे’ मेनिया । तिलजत्रो कारणबाट पहाडजत्रो सम्भावना सोची हल्ला गर्दै हल्लिनु ‘रे’ मेनियाको पहिलो लक्षण हो । टाइमचोर र कामचोरलाई यस रोगले बढी आक्रमण गर्छ । नेपालोप्याथीअनुसार ‘रे’ मेनियाका रोगीहरुमा सोच्ने शक्ति र तर्क गर्ने क्षमता केही हुँदैन; त्यसैले उनीहरु फुटपाथमा उभिएर मन्त्रिमण्डलको सूची बनाउँछन्; साइकलमा गडेर नवग्रहको निर्णय सुनाउँछन् । अझ ‘रे’ मेनियाका रोगीलाई यसपालि तिम्रो पनि भाग्य खुल्ने सम्भावना छ रे भनिदिनू; उसले स्वास्नीको सारी बन्धकी राखेर एउटा आडभान्स पार्टी बोलाउन बेर छैन ।
नं. ६- नेपालोप्याथीले अर्को एउटा नयाँ रोग पत्ता लगाएको छ, जसको नाम हो नामाञ्ची । हुन त दुनियाँमा जति मान्छे जन्मन्छन् सबैलाई आफ्नो नाम राख्ने धोको हुन्छ । तर जब यो सामान्यबाट असामान्यमा परिणत हुन्छ, नामाञ्चीको रोगले छोएको बुझ्नुपर्छ । आलुबारीको उत्खननदेखि शौचालयको शिलान्याससम्म के गरेमा ठूलो अक्षरमा नाम छापिएला भन्ने नामाञ्चीको ध्याउन्न हुन्छ । रेडियोमा दिनको पन्ध्रोटा फर्माइसी पठाएर हुन्छ कि, सागपात केलाउने समितिको अध्यक्ष भएर हुन्छ कि, दिनको चारोटा भाषण गरेर हुन्छ कि, साताको एउटा वक्तव्य प्रकाशित गरेर हुन्छ, नामाञ्चीका रोगीहरुलाई नामै चाहिन्छ । नेपालोप्याथीमा उल्लेख भएअनुसार दुनियाँको बजारमा नामको भाउ साह्रै महँगो छ; बिनाकाम नाम आउँदैन, तर नेपालका नामाञ्चीहरुलाई कामकुराको होइन, नामसुराको तिर्खाचाहिँ यस्तरी लाग्दछ कि कोठाको भित्ताभरि आफ्नो शुभकामना आफ्नै हस्ताक्षरमा लेखेर पनि उनीहरु तिर्खा मेट्न सर्माउँदैनन् ।
नं. ७- नेपालोप्याथीले अन्त्यमा एउटा व्यापक रोगको चर्चा गरेको छ । अधिकाशं जनातालाई बराबर दु:ख दिने यस महारोगको नाम हो- पकेटोक्य्रासिस । झ्याउरे अनुहार, दाउरे जीउ र चाउरे गाला पकेटोक्य्रासिसका लक्षण हुन् । यो बढ्दै गएपछि फेमेलियोसाइटिस पनि हुन सक्छ भनी एक अनुभवीले बताएका छन् । खास गरेर यो रोग शिक्षित बेकार र न्यूनवैतनिक कामदारहरुमा बराबर लागेको देखिन्छ ।
अहिले पत्ता लगाएका मुख्यमुख्य रोग यिनै हुन् । अनुसन्धान गर्दै जाँदा फेरिफेरि पत्ता लागेका जति फेरिफेरि बताउँदै जाउँला भन्ने उम्मेद छ; अब मलाई डाक्टरको दर्जा दिने कि नदिने त्यसबारे तपाईंहरु छलफल गर्दै गर्नुहोला ।
भैरव अर्याल प्रकाशित मिति : चैत २१, २०७२
चित्त बुझाउने मेलो
तरेली साहित्य प्रतिष्ठानको साहित्यिक शृङ्खला
भैरव अर्याल का थप सामाग्रीहरु